Donald Trump: Cawrada Madaxnimo ee Qarniga 21aad “Faallo” – Kasmo Newspaper
Donald Trump: Cawrada Madaxnimo ee Qarniga 21aad “Faallo”
Updated - January 28, 2017 1:51 pm GMT
Hal toddobaad oo keliya ayaa ka soo wareegtay maalintii la dhaariyey Madaxweyne Donald Trump. Laakiin culeyska la dareemayo waa badan yahay, waxaana ugu horreeya kuwii ugu jilicsanaa aadanaha.
Wuxuu amray in la joojiyo barnaamijyadii ay dad qaxooti ah, u badan caruur iyo qoysas, ku soo geli jireen dalka Maraykanka. Waxaa uu bar-tilmaansaday qaxootiga reer Suuriya, kuwooda Muslimka ah. Wuxuu amray in ayan dalka soo geli karin dadka ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Liibiya, Iran, Yaman iyo Ciraaq – Argagixisonimo darteed!.
Dalka Mexico, wuxuu amray in la bilaabo derbi dhererkiisu yahay in ku dhow 2000 mayl, waxaana socda abaabul lagu soo celinayo qaxooti malaayiin ah, oo aan sharci ku haysan gudaha Maraykanka. Iyadoo isla markaas, wadnaha farta lagu hayo in uu ku dhawaaqo Diiwaan-gelinta dadka caqiidadoodu Islaam tahay ee ku nool dalka Maraykanka.
Barnaamijyadaas waxaa Madaxweyne Donald Trump fulinaaya waqti lagu jiro xusuusta dadkii isir-gumaadka lagu sameeyey qarnigii 20aad (Holacust Memorial). Kuwaas oo dadkii ka badbaaday xarumahaas, ay hadda sii dhimanayaan. Waxaa dhammaanaya markhaatigii noolaa. Kuwii iyagoo caruur ah, iyaga iyo waalidkooda la kala soocay, dibna aan isu arkin.
Markaas, waxaaba suurtogal ah in imaanshaha Madaxtinimada uu yimid Donald Trump ay tahay cawro Dunida lagu tusayo in Hitler kale soo bixi karo. Iyadoo ay sii dabar-go’ayaan dadkii noolaa xilligaas iyo kuwii laga soo badbaadshay xarumihii xasuuqa (Concentration Camps) ee Nazigii Hitler.